2 Ndị Eze 16 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
16 N’afọ nke iri na asaa nke ọchịchị Pika nwa Remalaya, Ehaz+ nwa Jotam bụ́ eze Juda ghọrọ eze.
2 Ehaz gbara afọ iri abụọ mgbe ọ malitere ịchị, ọ chịkwara afọ iri na isii na Jeruselem; o meghịkwa ihe ziri ezi n’anya Jehova bụ́ Chineke ya dị ka Devid nna nna ya mere.+
3 O wee jee ije n’ụzọ ndị eze Izrel jere,+ ọbụna nwa nke ya ka o surere* n’ọkụ,+ dị ka ihe arụ+ nke mba ndị Jehova chụpụrụ n’ihi ụmụ Izrel si dị.
4 O wee na-achụ àjà ma na-esure ihe nsure ọkụ n’ebe ndị dị elu+ nakwa n’ugwu nta dị iche iche+ nakwa n’okpuru osisi ọ bụla jupụtara n’akwụkwọ ndụ.+
5 Ọ bụ mgbe ahụ ka Rizin+ eze Siria nakwa Pika+ nwa Remalaya eze Izrel gbagotere ibuso Jeruselem agha, ha wee nọchibido Ehaz, ma ha enweghị ike imeri ya.+
6 N’oge ahụ, Rizin eze Siria nwetaghachiiri Idọm Ilat,+ mesịakwa chụpụ ndị Juu n’Ilat; ma ndị Idọm banyere n’Ilat wee biri n’ebe ahụ ruo taa.
7 Ehaz wee zigara Tiglat-piliza+ eze Asiria ndị ozi, sị: “Abụ m ohu gị,+ bụrụkwa nwa gị. Gbagote zọpụta+ m n’ọbụ aka eze Siria nakwa n’ọbụ aka eze Izrel, bụ́ ndị na-ebuso m agha.”
8 Ehaz wee were ọlaọcha na ọlaedo ndị dị n’ụlọ Jehova nakwa n’ebe a na-edebe akụ̀ n’ụlọ eze+ wee zigara eze Asiria ngarị.+
9 Eze Asiria wee gee ya ntị, eze Asiria wee gbagoo Damaskọs+ weghara ya+ ma dọrọ ndị ya n’agha laa Kia,+ o gbukwara Rizin.+
10 Eze Ehaz+ wee gaa Damaskọs izute Tiglat-piliza+ eze Asiria, o wee hụ ebe ịchụàjà+ nke dị na Damaskọs. Eze Ehaz wee zigara Yuraịja bụ́ onye nchụàjà ọdịdị nke ebe ịchụàjà ahụ na ụkpụrụ ya dị ka ihe niile a rụrụ na ya si dị.+
11 Yuraịja+ onye nchụàjà wee wuo ebe ịchụàjà+ ahụ. Dị ka ihe niile Eze Ehaz si Damaskọs zitere ya si dị, ọ bụ otú ahụ ka Yuraịja onye nchụàjà mere ya, na-echere mgbe Eze Ehaz ga-esi Damaskọs lọta.
12 Mgbe eze si Damaskọs lọta, eze hụrụ ebe ịchụàjà ahụ; eze wee malite ịga n’ebe ịchụàjà ahụ+ ma na-achụ àjà n’elu ya.+
13 O wee na-esure+ àjà nsure ọkụ+ ya na àjà ọka*+ ya ma na-awụpụ àjà ihe ọṅụṅụ+ ya, na-efesakwa ọbara anụ àjà udo ya n’elu ebe ịchụàjà ahụ.
14 O sikwa n’ihu ụlọ Jehova, nke dị n’agbata ebe ịchụàjà ya na ụlọ Jehova,+ buru ebe ịchụàjà ọla kọpa+ ahụ, ma dọba ya n’akụkụ ebe ugwu nke ebe ịchụàjà ya.
15 Eze Ehaz wee nye ya iwu, ya bụ, Yuraịja+ onye nchụàjà, sị: “Suree+ àjà nsure ọkụ nke ụtụtụ n’elu nnukwu ebe ịchụàjà a, tinyere àjà ọka nke mgbede+ na àjà nsure ọkụ nke eze+ na àjà ọka ya na àjà nsure ọkụ nke ndị niile nke ala a na àjà ọka ha na àjà ihe ọṅụṅụ ha; ị ga-efesakwa ọbara niile nke anụ àjà nsure ọkụ na ọbara niile nke anụ àjà nkịtị n’elu ya. Ma m ga-echebara ebe ịchụàjà ahụ e ji ọla kọpa rụọ echiche.”
16 Yuraịja+ onye nchụàjà wee mee ihe niile Eze Ehaz nyere ya n’iwu.+
17 Eze Ehaz gbukasịkwara+ akụkụ+ ihe ndọkwasị+ ihe ndị ahụ ma wepụ efere ha;+ o butukwara oké osimiri+ ahụ dị n’elu oké ehi+ ndị e ji ọla kọpa kpụọ, bụ́ ndị dị n’okpuru ya ma dọkwasị ya na pevment nkume.
18 Ebe ahụ e kpuchiri elu ya ekpuchi maka ụbọchị izu ike, nke e wuru n’ụlọ ahụ nakwa ebe mpụta nke ụzọ eze si abata, ka o si n’ụlọ Jehova buga ebe ọzọ n’ihi eze Asiria.
19 Ma ihe ndị ọzọ metụtara Ehaz, ihe ndị o mere, ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ+ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Juda?
20 N’ikpeazụ, Ehaz sooro nna nna ya hà dinaa, e wee lie ya n’ebe e liri nna nna ya hà n’Obodo Devid;+ Hezekaya+ nwa ya wee malite ịchị n’ọnọdụ ya.